Mpanao politika sasany Tsy mipoitra raha tsy krizy
CENI Madagascar “Tsy nitanila izany izahay”
Navoakan’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana ny sabotsy 17 novambra 2018 teo teny amin’ny foibeny Alarobia ny voka-pifidianana vonjimaika mifandraika amin’ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin’ny alarobia 7 novambra 2018.
Ravalomanana ho Filohan’ny Malagasy Misokatra amin’ny rehetra hatrany
Nahazo salan’isa 35, 29% ny kandida Marc Ravalomanana. Io no vokatra vonjimaika navoakan'ny Ceni Madagascar. Isaorana isika vahoaka nametraka fitokisana tamin'i Dada, hoy ny hafatra nataony.
Fifidianana filoham-pirenena Malagasy 4,9 tapitrisa mahery no tsy nifidy
Miisa 5 367 871 amin’ny 9 898 544 no tonga nifidy izay manome 54,23% raha ny antontanisa navoakan’ny CENI tamin’ny voka-pifidianana vonjimaika nomena ny HCC.
Fifidianana hafakely Be ireo kandida resin’ny vato fotsy sy maty
Efa nolazaina fa tsy hanam-paharoa tamin’izay nitranga teto ambonin’ny tany ity fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara indray mitoraka ity.
Ravalomanana sy Rajoelina Fihodinana faharoa hampangitakitaka
Hifampitady any anaty fifidianana filoha fihodinana faharoa i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina raha tsy misy ny fiovana goavana amin’ny voka-pifidianana havoakan’ny HCC taorian’ny an’ny CENI.
Antoko HVM Mitaky ny fanafoanana ny fifidianana
Nisy ny tatitra nataon`ny antoko HVM mahakasika ny taratasy fitorian`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) sy ny tsy nety nataony tetsy amin`ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny sabotsy lasa teo.
Imbiky Herilaza “Mila mitandrina ny rehetra”
Fifidianana efa nandrasan`ny Malagasy an-taonany maro ity fihodinana faharoa ity izay hifanandrinan`i Marc Ravalomanana sy i Andry Nirina Rajoelina.
Nangingina izy ireo tato ho ato ary sarotra ny hino fa fifanandrifian-javatra ny fifanojoan’izany tamin’ny fiafaran’ny tolon’ny fanovana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey.
Ireo mpanao politika sasany izay tsy mipoitra raha tsy anaty vanim-potoanan’ny krizy na mandindona krizy no tian-kambara. Izay tokoa angaha no tonga amin’ilay fitenenana hoe sarotra ny miala amin’ny mahazatra satria dia mbola hita ho tsy miova ihany hatramin’izao ny fomba amam-panaon’izy ireny. Maneho hevitra etsy sy eroa mody mandamina sy manolotra vahaolana. Rehefa tena zohiana anefa ny fikaonan-doha izay tarihina sy karakarain’izy ireo dia vao mainka mitondra ho any amin’ny korontana ary fitadiavan-tseza no tena imasoany. Tsy olom-baovao ihany izy ireny amin’ny ankapobeny fa efa teo foana saingy tsy nety naharesy lahatra ny maro. Ny ronono an-tavy entiny ve no vakiana fotsiny araka ny fitenin-jatovo sa ilay loha maha mpitarika azy ireo mihitsy no tsy mety tazana eny aminy ? Anjaran’izy ireny no mandini-tena sy mijery izay tena tokony hataony amin’ny firenena amin’izay.